Pepa Straw Bag Fekitori - China Pepa Uswa Bhegi Vagadziri & Vatengesi
Dyara Fiber Bhegi
Pepa Uswa Bhegi
Cotton & Mucheka Bag
Inotakurika Bhegi Bhegi
Yakagadziriswa Evha Bhegi
Inoderedzwa TPU Bhegi
PU Chinyorwa Pocket Sport St ...
Eco-inoshamwaridzika yakajeka PU quil ...
Eco-ushamwari PU zvizorwa ba ...
Eco-inoshamwaridzika inogadziriswa ...
Yenyika Cotton Canvas Bag ...
Inonyanya kugadzira mabhegi ekuzora, mabhegi ekuwachisa, mabhegi ekuzora, mabhegi echipo, mabhegi ekupakata, mabhegi ekushambadzira, mabhegi ekutenga, mabhegi egungwa, nezvimwewo Kuti uwane budiriro inoenderera, zvimwe zvinhu zvine hunyanzvi zvakatipoteredza zvinoshandiswa zvakanyanya muzvigadzirwa zvedu.
Yakasarudzika Pepa Straw Bhegi Eco-inoshamwaridzika Yekushongedza Murongi Zipper Homwe Gadzira Up Bhegi
Chimiro hachina kukura zvekuti chiri nyore kutakura nekuchengetedza, kunze kwekunge yakanaka uye yakakosha kuti unisex ishandiswe. Iyo yekudhonza ndiyo yakafanana zvinhu seyomuviri.Bhegi rese nderechisikigo uye rinosangana ne "zvakatipoteredza zvine hushamwari" mvura. Iyo yekudhonza ndiyo imwecheteyo zvinhu seyemuviri.Bhegi rese nderechisikigo uye rinosangana ne "zvine hushamwari hwemamiriro ekunze" aquirements.
Pepa Uswa homwe Eco-inoshamwaridzika Natural Ruvara Gadzira Up Yekushongedza Murongi
Mitsara yezvinhu yakatwasuka uye yakashambidzika, unogona kunzwa mhando yemhando isu yatakasarudza yakakwirira uye inovimbisa. Zvakare, iyo mashanga emapepa haangoite echisikigo uye anogona kudzoreredzwa asi hapana hwema hwekunhuhwira Nechinangwa chekusimudzira kwakasimba, ikozvino kwakawanda uye zvakanyanya nharaunda. -shamwari zvigadzirwa zvakashandiswa zvakasiyana siyana.
Eco-inoshamwaridzika zvizorwa Bhegi Kurongedza Zipper homwe neTassel Puller
Chimiro hachina kukura zvekuti chiri nyore kutakura nekuchengetedza, kunze kwekunge yakanaka uye yakakosha kuti unisex ishandiswe. Bhegi rese nderechisikigo uye rinosangana ne "zvakatipoteredza zvine hushamwari" zvinodiwa. Bhegi iri T-chimiro chakadzikama.
Cotton & Mucheka
NO167 mugwagwa wechipiri weGaoxin, Gaoxin Dunhu, Heyuan, China